Barcelona oo cashar ugu dhigatay Real Madid garoonkooda +Sawiro – Gool FM
Barcelona oo cashar ugu dhigatay Real Madid garoonkooda +Sawiro
Bashiir February 27, 2019
(Spain) 28 Feb 2019 Kooxda Barcelona ayaa guul 3-0 ah ka gaartay kooxda Real Madriid kulan ciyareedkii ka tirsanaa tartanka boqorka Spain wareegiisa Semi finalka .
Kulan ayaa ahaa mid xiiso badan waxa uuna ka tirsanaa tartanka boqorka Spain , qeebtii koowaad ee kulanka wax gool ah la iskama dhalin oo waa la is mari waayey .
Ciyaaryahanada labada dhinic waxa ay heleen jaanisyo dhowr ah balse midna kama uusan faa ideysan janisyadaadas qeebtii koowaad .
Waxaa loo dareeray qolka labiska si ay ciyaaryoyda u soo qataan waqtiga nasiinada ugu dambeena waxaa dib loo anaba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta .
Wiilasha kooxda Barca ayaa dar dar xoogan la soo galay qeebtii dambe ee ciyaarta waxa ayna la yimaadeen sede gool oo wadna qabad ku noqday taageerayaasha iyo ciyoortoyda kooxda Madriid .
Laacibka xulka qaranka Urugay ee Luis Suarez ayaa ka dhaliyey kooxda Madrid goolasha loo yaqaano sedex leyda , labo kamida goolasha uu dhaliyey waxaa caawiye ka ahaa wiilka reer Farance ee Osmane Dambele .
Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-0 Madrid ayaana awoodi weysay in ay la yimaad xitaa gool iyaga oo ku ciyaaraya ciidooda , balse waxaa xusid mudan in markale todoobadn soo socda bilowgiisa ay isku arki doonaan kulan ka tirsan horyaalka La Liga .
Kooxaha Chelsea, Liverpool, Man City iyo Man United oo gaaray guulo muhiim ah
“In kursiga keydka uu fariisto Kepa waxay fariin u tahay qof walba” - Sarri